अब कोरोना भाइ’रसको स’ङ्क्रमणबाट सबैभन्दा जोखिम काठमाडौंमा-बिरामी भएको बहानामा उपत्यकामा आउने क्रम रोकि’एन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अब कोरोना भाइ’रसको स’ङ्क्रमणबाट सबैभन्दा जोखिम काठमाडौंमा-बिरामी भएको बहानामा उपत्यकामा आउने क्रम रोकि’एन !
काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरु’द्ध ब’न्दाब’न्दीको समयमा उपत्यकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बाहिरी रहँदा पछिल्लोपटक उपत्यका भित्रिने क्रमसमेत बढेको देखिएको छ। यसअघि उपत्यका छाडेर घर जानेको तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन। तथ्याङ्कको अभावमा ब’न्दाब’न्दीको समयमा उपत्यका बाहिरिएका नागरिक शक्तिको आड वा लुकिछिपी पुनः भित्रिन थालेका छन्। कतिपय नागरिक विभिन्न नाकाबाट बिरामीको बहानामा एम्बुलेन्स मार्फत उपत्यका भित्रिन थालेका हुन् ।
लुकिछिपी उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट उपत्यका भित्रिन थालेकाले व्यक्तिसँगै कोरोना भाइरस पनि भित्रिन सक्ने खतरा बढ्दै गएको कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका अहिलेसम्म कोरोना भाइ’रसको स’ङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहेको देखिएको छ।
उनका अनुसार सीएमसी काठमाडौँले एक साताको बीचमा भीमढुङ्गा, दक्षिणकाली, साँखु लगायतका उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा अनुगमन गर्दा लु’किछिपी उपत्यकामा आउने क्रम नरोकि’एको पाइएको हो। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बिरामी भएको बहानामा एम्बुलेन्सबाट उपत्यका भित्रिन खोज्ने कतिपय व्यक्तिलाई भक्तपुरको प्रवेश गर्ने नाका साँगा र जगातीबाट फिर्ता पठाइएको बताए।